अब २ हजार मा पि सि आर परिक्षण हुने – BANKE POST
Posted on September 14, 2020 September 14, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
किन घट्यो शुल्क?
पीसीआर परीक्षणका निम्ति आवश्यक सामग्रीको भाउ घटेकोले परीक्षण शुल्क घटाइएको बताइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, “हाल पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको मूल्य घटेकाले पहिलेको शुल्कमा घटाउने गरी निर्णय गरिएको हो।”
सामग्रीको मूल्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको उनले बताए।
परीक्षणका निम्ति चाहिने रसायन वा रिएजेन्टको भाउ घटेको उनले बताए।
अब सरकारी प्रयोगशालामा पनि शुल्क तिरेर कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न पाइने
शव व्यवस्थापनका लागि किन रोजिन्छ रातिको समय र अज्ञातस्थल
शुरुमा पीसीआर परीक्षणका लागी १० प्रतिशत सेवा शुल्क सहित ६ हजार ५० रुपैयाँ तोकिएको थियो।
हाल देशभरिका ३४ वटा सरकारी र १३ वटा निजी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाण्डू उपत्यकाका ३ वटा अनी हरेक प्रदेशमा १/१ वटा प्रयोगशाला बाहेक अन्य प्रयोगशालाले दैनिक परीक्षणको आधामात्रै सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सरकारले सुरुवाती दिनमा पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्दै आएको थियो। निशुल्क भएका कारण परीक्षण गराउन जानेको भिड बढ्दै गएको भन्दै परीक्षण मापदण्डलाई कडाइ गरेर शुल्क तिरेर पनि परीक्षण गर्न पाउने बाटो खोलिएको थियो।
हाल लक्षण देखिएका सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको र अग्रपङ्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मात्रै निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ।
हालसम्म ८ लाख ४० हजारभन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण गरिसकिएको छ।बि बि सि मा खबर प्रकासित छ